Ukucaca: Amamephu Wokushisa Amahhala kanye Nokurekhodwa Kweseshini Kokuthuthukisa Iwebhusayithi | Martech Zone
Njengoba siklame futhi sakha itimu yangokwezifiso yakwaShopify eyethu isitolo sokugqoka esiku-inthanethi, besifuna ukuqinisekisa ukuthi siklame isayithi le-ecommerce elihle nelilula elingazange liphithene noma lisingathe amakhasimende abo. Isibonelo esisodwa sokuhlola kwethu umklamo kwaba a Ulwazi oluningi block eyayinemininingwane eyengeziwe mayelana nemikhiqizo. Uma sishicilele isigaba endaweni yokuzenzakalelayo, sizokwehlisa inani ngokuphawulekayo futhi sengeze inkinobho yekalishi. Nokho, uma sishicilele imininingwane engezansi, isivakashi singase siphuthelwe ukuthi bekunemininingwane eyengeziwe.
Sinqume ukwenza isigaba sokuguqula esiqanjwe ngokufanelekile Ulwazi olubanzi. Nokho, lapho siyishicilela kusayithi, saqaphela ngokushesha ukuthi izivakashi zazingachofozi engxenyeni ukuze ziyinwebe. Ukulungisa bekucashile impela... inkomba encane eduze kwesihloko sesigaba. Uma isifakiwe, sabuka amamephu ethu okushisa futhi sabona ukuthi inani elikhulu lezivakashi manje selihlanganyele noguquko.
Ukube besingarekhodi izikhathi futhi sikhiqize amamephu okushisa, besingeke sikwazi ukuhlonza inkinga noma sihlole isisombululo. I-Heatmapping ibalulekile uma uthuthukisa noma yiluphi uhlobo lwewebhusayithi, isayithi le-ecommerce, noma uhlelo lokusebenza. Sekushiwo lokho, izixazululo ze-heatmapping zingabiza kakhulu. Iningi lisuselwa enanini lezivakashi noma izikhathi ofisa ukuzilandelela noma ukuzirekhoda.
Ngokujabulisayo, umdondoshiya embonini yethu unesixazululo samahhala esitholakalayo. Ukucaca KweMicrosoft. Vele ufake ikhodi yokulandelela Ukucaca kusayithi lakho noma ngeplathifomu yakho Yokuphathwa Komaka futhi uyasebenza emahoreni ambalwa njengoba izikhathi zithathwa. Okungcono nakakhulu, i-Clarity inokuhlanganiswa kwe-Google Analytics… ibeka isixhumanisi esikahle sokudlalwa kweseshini ngaphakathi kwedeshibhodi yakho ye-Google Analytics! Ukucaca kudala ubukhulu bangokwezifiso obubizwa ngokuthi I-URL yokudlala ecacile ngesethi encane yokubukwa kwekhasi. Inothi eseceleni... ngalesi sikhathi, ungakwazi ukwengeza isakhiwo sewebhu esisodwa kuphela ukuze usihlanganise ne-Clarity.
I-Microsoft Clarity inikeza izici ezilandelayo...
Amamephu okushisa asheshayo
Dala ama-heatmaps ngokuzenzakalela kuwo wonke amakhasi akho. Bona ukuthi abantu bachofoza kuphi, yini abangayinaki, nokuthi baskrola kude kangakanani.
Buka ukuthi abantu basebenzisa kanjani isayithi lakho ngokurekhodwa kweseshini. Hlola ukuthi yini esebenzayo, funda ukuthi yini okufanele ithuthukiswe, futhi uhlole imibono emisha.
Imibono kanye nezigaba
Thola ngokushesha lapho abasebenzisi bakhungatheka khona futhi uguqule lezi zinkinga zibe amathuba.
Ukucaca sekumi ngomumo i-GDPR ne-CCPA, ayisebenzisi ukusampula, futhi yakhelwe emthonjeni ovulekile. Okuhle kunakho konke ukuthi uzojabulela zonke izici ze-Clarity mahhala ngokuphelele. Awusoze wabhekana nemikhawulo yethrafikhi noma uphoqwe ukuthi uthuthukele enguqulweni ekhokhelwayo… kumahhala naphakade!
Bhalisela I-Microsoft Clarity
Tags: Ukucacaukwenziwa kwe-ecommercemicrosoft ukucacaokuqoshiwe kweseshininokwenza indawotestingukuthuthukisa i-website